'माधव र प्रचण्डले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा गद्दारी गरे, ओलीको नेतृत्वमा हामी फेरि उदाउनेछौं, झ्यालबाट छिरेका देउवालाई विस्थापित गर्नेछौं'Nepalpana - Nepal's Digital Online
'माधव र प्रचण्डले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा गद्दारी गरे, ओलीको नेतृत्वमा हामी फेरि उदाउनेछौं, झ्यालबाट छिरेका देउवालाई विस्थापित गर्नेछौं'
नेपालपाना आषाढ ३१ २०७८
काठमाडौं । नेकपा एमालेका युवा नेता महेश बस्नेतले प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा गद्दारी गरेको आरोप लगाएका छन् । केपी शर्मा ओलीको कमाण्डिङमा कम्युनिस्टहरु फेरि उदाउने र झ्यालबाट छिरेका देउवालाई विस्थापित गर्ने उनको भनाई छ ।
बस्नेतको भनाई जस्तो तस्तै:
इतिहासमा कतिपय प्रधानमन्त्री अलोकप्रिय भएर फर्किन्छन् । पदबाट हट्दा अपमानित ढंगले प्रस्तुत गर्ने परम्परालाई चुनौती दिँदै युवाहरुले यसपालि हजारौ मोटर साइकल र गाडीमा विभिन्न बाजागाजासहित प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको बहिर्गमनमा दिदीबहिनी र ज्येष्ठ नागरिकले स्वागत तथा सम्मान गरियो ।
यसले के सन्देश दिएको छ भने जनताको सेवामा काम गर्दा जसरी मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि प्रधानमन्त्री भन्दा पनि असल मान्छेका रुपमा स्विकानुस् भन्नुभयो त्यसलाई सबैले स्विकारे । प्रधानमन्त्री ओलीले शक्तिसँग लड्छु सत्यसँग होइन भन्ने संकल्प गर्नुभयो ।
मेरो एकमात्र उद्देश्य भनेको जीवन परिवर्तन गर्ने सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने मेरो छोराछोरी नभएकाले सबै जनताका छोराछोरी मेरा हुन् भन्ने हिसाबले सोच्नुभयो । सारा जनताले केपी बा वि लभु भन्दै स्वागत गरे ।
अदालतले कहीँ पनि एउटा प्रधानमन्त्री विस्थापित गरेर अर्को नियुक्त गरेको इतिहास छैन । विश्वासको मत प्राप्त गर्न शेरबहादुर देउवाले हर्कतहरु गरिसकेका छन् । एक महिनापछि विश्वासको मत देउवाले नपाउँदा प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजपाले गरेको समर्थन कायम रहँदा उहाँले फेरि ७६ (५) को सरकारमा दाबी गर्ने स्थिति कायम रहेको हुँदा सम्मानित भनिएको अदालतले के गर्छ? यो कुरा निकै गम्भीर अवस्था छ । आज अदालतले संसदीय व्यवस्थालाई असर गर्ने, राजनीतिक दललाई असर गर्ने जुन काम गरेको छ यो निकै गम्भीर छ ।
हुनत उहाँहरुले भन्नुहुन्छ हाम्रै पार्टीका माधव नेपालसहित २३ सांसदले हस्ताक्षर गर्दा यो अवस्था आयो । यो सत्य हो । माधव कमरेडहरुले गद्दारी गरेकै हो । उहाँकै गद्दारीले यो परिस्थिति आएको हो । अझ सबैभन्दा पहिला कोभिडमा हात मिलाएर बधाई दिने र निकै खुसी हुनुहुन्छ । उहाँसँग भएका साथीहरुले पछुताउ गरेर एमाले एकता बचाउनुपर्छ भनेर आएका छन् । माधव र प्रचण्डले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा गद्दारी गरे । इतिहासले गम्भीर समीक्षा गर्नेछ । अदालतको फैसलाको पनि समीक्षा हुनेछ ।
ओलीको नेतृत्वमा ५० लाख मतसहित एकलौटी बहुमत ल्याउनेगरी बहुमत ल्याउने छौं । हामी फेरि उदाउनेछौं । उठ्ने छौं । झ्यालबाट छिरेका देउवालाई सिंहदरवारको मुख्य गेटबाट छिरेर विस्थापित गर्नेछौं ।
अदालतले यत्रो ठूलो रिक्स कुन अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको आडमा भयो? अक्षम देउवाले चुनाव गर्न सक्दैनन् र घुमिफिरी आफै प्रधानमन्त्री भन्ने मनोभाव न्यायमूर्तिमा देखियो ।
एउटा श्रीमतीसँग सम्बन्ध विच्छेद नगरी अर्कोसँग विहे गर्न पाइँदैन । तर अदालतले एउटा पार्टी नछोडी अर्को पार्टीमा समर्थन गर्नेलाई ह्विप नलाग्ने भनेर दल सम्बन्धी कानुन नै संशोधन गरिदिएको छ । दलीय व्यवस्थामा यो गम्भीर अपराधलाई प्रश्रय दिएको छ ।
आषाढ ३१, २०७८ बिहिवार १०:५८:२७ बजे : प्रकाशित